China KXZ Series Slurry Pump mpanamboatra sy mpamatsy | KAIQUAN
Miaraka amin'ny fanoherana mahatalanjona mivaingana sy fahombiazana avo lenta, ny paompy slurry series an'ny KXZ dia mety indrindra amin'ny fitaterana slurry mahery vaika toy ny slurry voa sy ny fanasana arina. Ampiasaina be izy amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, metallurgy, arina, herinaratra, fitaovana fananganana, indostrian'ny simika, fitehirizana rano ary saha hafa.
Taham-pitetezana: 16.7-3550 m3 / h
Paompy slurry Kaiquan
1. Ampiasao ny teôria famolavolana farany sy ny fomba famolavolana haingam-pandeha amin'ny fikorianan'ny dingana roa, apetaho ny CFD, CAE ary famolavolana haitao maoderina hafa, miaraka amin'ny fahombiazan'ny hydraulic sy ny fahombiazany.
2. Ny fitsaboana manokana dia tanterahina amin'ireo fizarana mora tonta toy ny diaphragm, ny fidiran'ny impeller ary ny peratra ivelany an'ny takelaka mpiambina. Ny volute sy ny plate guard dia natao miaraka amin'ny hateviny tsy mitovy, ary ny faritra mora hitafy dia matevina, izay manatsara ny fiainan'ireo faritra mikoriana.
3. Ny fidiran'ny impeller dia manamboatra endrika fironana ara-toekarena famehezana, izay manatsara ny vokatra famehezana, mampihena ny fikaohon-tany sy ny fanosotra, ary manatsara kokoa ny fanoherana ny fitafy.
4. Ny impeller dia namboarina niaraka tamin'ny lamosina lamosina tsy manam-paharoa, izay afaka mampihena amin'ny fomba mahomby ny fiverenan'ny slurry, mampihena ny tsindry famehezana ary manatsara ny fahombiazan'ny paompy.
5. Ny rotor dia azo ahitsy axial mba hiantohana ny elanelan'ny impeller, mba hahafahan'ny pump mandeha tsara mandritra ny fotoana maharitra.
6. Ampiasao ny impeller mpanampy sy ny fametahana tombo-kase tombo-kase na ny tombo-kase mekanika mba hahazoana antoka fa tsy misy famoahana slagry slagry.
7. Ny toerana fivoahan'ny paompy dia azo apetraka ary ampiasaina amin'ny elanelam-potoana 45 ° ary ahodina amin'ny zoro valo samihafa araky ny filàna.
Teo aloha: 1200-1600 ZLB, HLB Vertical Axial Flow Pump, Campe d'exploitation
Manaraka: KZJ Series Slurry Pump
SKisary tructural an'ny KXZ Series Slurry Pump
Spectrum diagram sy famaritana ny KXZ Series Slurry Pump